रंगीन खबर – Page5– SamajKhabar.com
गीत संगीतका स्टारको स्टार : संगीत स्टार २०१८’
काठमाण्डौ । तपाइृ गायन तथा नृत्य विधामा भविष्य खोजीरहनु भएको छ ,? वा आफु सँग कला,क्षमता र रुची हुदाहुदै पनी अवसर पाउनुभएको छैन ? त्यसो भए तपाइलाइ स्टार बन्ने एक मौका बन्न सक्छ ‘संगीत स्टार २०१८ । गायन तथा नृत्य विधामा संभावना भएका प्रतिभाहरुलाई स्थान दिने उद्देश्यका साथ संगीत स्टार २०१८ सुरु भएको छ ।....पुरा पढ्नुहोस
काठमाण्डौ । ( तस्बीर :क्षेत्रीको फेसबुक बाट ) लामो समय बुटवलमा नृत्य प्रशीक्षण गराएका डान्स क्षेत्रका देव शिव क्षेत्री शिवाजीले राजधानी काठमाण्डौमा आफ्नै डान्स सेन्टर सञ्चालन गर्ने भएका छन् । हजारौ विध्यार्थाीलाई प्रशीक्षण प्रदान गरीसकेका शीवलाइ आफ्नै....पुरा पढ्नुहोस
प्रसादमा निसन्तानको कथा !
काठमाडौं: फिल्म 'प्रसाद' बन्ने भएको छ। सोमबार फिल्मको औपचारिक घोषणा गरियो। फिल्म पत्रकार सुशिल पौडेलको कथा पटकथा लेखनमा बनेको फिल्मलाई दिनेश राउतले निर्देशन गर्नेछन्। नम्रता श्रेष्ठ, विपिन कार्की र नविन मानन्धरको शीर्ष अभिनय रहनेछ। नम्रता र विपिन श्रीमान-श्रीमतिको भूमिकामा रहनेछन्। निःसन्तान....पुरा पढ्नुहोस
अमेरिकन टेलिभिजनकर्मी तथा महिला व्यवसायी पेरिस हिल्टनले एक क्लबमा नाच्दानाच्दै आफ्नो २० लाख डलर पर्ने औँठी हराएकी छन् । लगभग २१ करोड नेपाली रुपैयाँ पर्ने उक्त औँठी खोजविनका क्रममा भेटिएको छ । एक वेबसाइडसँगको कुराकानीमा त्यहाँ उपस्थित मान्छेहरूले बताए कि उनी हात हल्लाउँदै नाचिरहेकी थिइन्....पुरा पढ्नुहोस
आफ्नो पहिलो गीत ल्याउदै गीतकार सर्वेन्द्र अधिकारी
काठमाडौं । विगत १० वर्षदेखि बेलायतमा बस्दै आएका गीतकार सर्वेन्द्र अधिकारीले आफ्नो पहिलो गीत सार्वजनिक गर्न लागेका छन् । सानै उमेरदेखि संगीतमा रुची राख्ने अधिकारीले किन हेर्यौ फर्किएर बोलको गीत मार्फत सांगितिक दुनियाँमा प्रवेश गर्न लागेका हुन् । उनी आफ्नो गीतमा आफै अभिनय पनि गर्दैछन् । उनले आफ्नो....पुरा पढ्नुहोस
चर्चित भारतीय नायिका श्रीदेवीको निधन !
एजेन्सी । भारतीय चर्चित अभिनेत्री श्रीदेवीको ५४ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । वैवाहिक समारोहका लागि दुवईमा पुगेका बेला हृदयघात भएर श्रीदेवीको निधन भएको पारिवारिक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै भारतीय संचारमाध्यमले जनाएका छन् । उनले ३ सय भन्दा धेरै चलचित्रमा अभिनय गरेकी छिन् । श्रीदेवीले नगिना,....पुरा पढ्नुहोस
एजेन्सी– सेलिब्रेटीहरू आरामदायी जीवन बिताउने कुरा कुनै नौलो विषय होइन्। तरपनि तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ, उनीहरूको दिनचर्या सुनेर। त्यसैले आम मानिसलाई उनीहरूको जीवन शैलीलाई लिएर बढी उत्सुक्ता हुने गर्छ। सेलिब्रेटीहरूको कमाई मात्र कलाकारिताबाट हुँदैन्। उनीहरूले पनि अन्य व्यवसायी झै विभिन्न पेशा....पुरा पढ्नुहोस
काठमाडौँ । सिजन मिडियाले राजधानीको अक्षरा स्कूल काडाघारीमा शनिबार आयोजना गरेको ‘मिस ई–कलेज २०१८’ मा व्रिटीस कलेजमा अध्यायनरत २० वर्षीया काजल तामाङले शीर्ष ताज चुम्न सफल भइन् । उनलाई मिस इकलेज २०१५ की विजेता नितिका कर्मचायले ताज पहिराइ दिएकी थिइन् । उनले विधागत तर्फको ‘मिस पर्सनालीटी’को टाइटल....पुरा पढ्नुहोस
‘पद्मावत’ ले कमायो २ सय ५० करोड
नयाँ दिल्ली (एजेन्सी)– ‘पद्मावत’ भारतीय सिनेमा उद्योगमा २ सय ५० करोडभन्दा बढी कमाउने आठौं फिल्म बनेको छ। फिल्मले रिलिज भएको १८औं दिन घरेलु बक्स अफिसमा २ सय ५४ करोड नेट व्यापार गरेको बलिउडका व्यापार विश्लेषक रमेश बालाले जनाएका छन्। फिल्मले पहिलो साता १६६.५० करोड, दोस्रो साता ६९.५० करोड र तेस्रो साता १८....पुरा पढ्नुहोस
कलाकार राजेन्द्र खड्गीविरुद्ध मानव तस्करीको आरोप, सिआइबीको अनुसन्धान
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले चर्चित द्वन्द्वनिर्देशक राजेन्द्र खड्गीविरुद्ध मानव तस्करीको अभियोगमा अनुसन्धान सुुरु गरेको छ । खड्की सबैभन्दा धेरै नेपाली चलचित्रमा द्वन्द्व निर्देशन गर्ने निर्देशक हुन् । खड्गीले दक्षिण कोरियाको कार्यक्रममा सहभागी गराउने....पुरा पढ्नुहोस